Jaango daqiiqad run ah: 8 Talaabo oo Diyaar ah | Martech Zone
Axad, Maarso 24, 2013 Axad, Maarso 24, 2013 Douglas Karr
Dabayaaqadii sanadkii hore waxaan u istaagay saaxiibkey si aan ugu soo bandhigo barnaamijka Google Xilliga dhabta ah ee runta ah. In kasta oo ay jiraan culeysyo badan iyo waxyaabo la galiyay diiwaangelinta istiraatiijiyadda, inta badan suuqgeyaasha casriga ah maaddadu si caddaalad ah ayey u tahay aasaasi. Asal ahaan, xilliga go'aan gaarista marka aad go'aansato inaad wax iibsato waa kan Xilliga dhabta ah ee runta ah - ama si fudud ZMOT.
Waa kuwan Soo bandhigida ZMOT Waan sameeyay:
Waa kuwan fiidiyow faahfaahsan oo ku saabsan mawduuca oo leh warshadaha gawaarida tusaale ahaan:
In kasta oo ZMOT uusan noqon karin mid kacaan ah, Google wuxuu liis garayaa 8 talooyin diyaargarow ah oo aan aaminsanahay in lagu daro istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah oo internetka ah:
Ka bilow khadkaaga hoose - Waa maxay yoolka ganacsigaaga?
U Diyaar Garow Cabirka - Waa inaad awoodid inaad cabirto natiijada si aad horumar ugu sameyso.
Ka bilow aasaaska - Sidee dadku kuu raadinayaan, uga hawl galayaan waxna kaaga iibsanayaan khadka tooska ah?
Hayso ballanqaadyadaada ZMOT - Markay ku helaan, miyaad siineysaa macluumaadka ay raadinayeen?
Raac Sharciga 10/90 - Ku maalgeli 10% dakhligaaga qalab iyo adeegyo aad ku kobciso ganacsigaaga.
Kahor Ciyaarta - Kaliya ha diirada saarin halka uu tartankaagu yaalo, diirada saar halka uu noqon doono ama aragtidaada balaaran ka qaado sida ay kuu helayaan.
Isha Ku Hay Ku-beddelashada Micro-ka - Kaliya maahan iibsiga, daawashada dhaqdhaqaaqa bulshada, rukumashada, soo dejinta, diiwaangelinta, iwm. Kuwaas oo horseeda rajada noqoshada macaamiil.
Ku Bilaw Fashilka - Ka noqo istiraatiijiyadda weyn oo raadso siyaabo aad ugu xawaareyn karto qiyaas yar - joog-dhaqaaq.
Download faahfaahinta buuxda ee Xaashida Diyaarsanaanta ZMOT oo hubi Xilliga dhabta ah ee runta ah goobta wixii macluumaad dheeraad ah.
Tags: suuqgeynta gawaaridabaabuurtawarshadaha suuqgeynta baabuurtagoogle +daqiiqad eber ahdaqiiqad eber run ahZMOT